म व्यायाम गर्न कसरी उत्प्रेरणा पाउन सक्छु? | युवाहरू सोध्छन्‌
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अब्खाज अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओक्पे ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काचिन काबुभरदियानु काम्बा किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किर्गिज किलुबा कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्यामा गा गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डाँग्मे डेनिश तामिल तारास्कान तेलगु तोजोलबल त्वी थाई नजेमा नर्वेली निऊ नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाश्कीर बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज मङ्गोलियन मले मल्यालम माम माया मालागासी मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ वारे-वारे वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
मैले व्यायाम किन गर्नुपर्छ?
मलाई केले रोकिरहेको छ?
व्यायाम गर्न थाल्न म के गर्न सक्छु?
कुनै-कुनै देशका युवाहरूले व्यायाम गर्न खासै समय दिइरहेका छैनन्‌ र यसले गर्दा तिनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई खतरामा पारिरहेका छन्‌। बाइबलले ‘शारीरिक तालिमबाट फाइदा हुन्छ’ भन्‍नु साँच्चै सही हो। (१ तिमोथि ४:८) निम्न कुराहरू विचार गरौँ:
व्यायामले तपाईँलाई सकारात्मक मनोवृत्ति राख्न मदत दिन्छ। शारीरिक गतिविधिले दिमागबाट इन्डोर्फिन भन्‍ने एक किसिमको रासायनिक तत्त्व निकाल्छ, जसले हामीलाई शान्त र खुसी रहन मदत गर्छ। कसै-कसैको विचारमा डिप्रेसन भएकाहरूको लागि व्यायाम एउटा राम्रो औषधी हो।
“बिहान उठ्‌नेबित्तिकै दौडिन जाँदा मेरो पूरै दिन रमाइलो हुन्छ र धेरै काम पनि भ्याउन सक्छु। साथै मेरो मुड पनि राम्रो हुन्छ।”—रेजिना।
व्यायाम गर्दा तपाईँ फुर्तिलो र राम्रो देखिनुहुन्छ। सन्तुलित किसिमको व्यायामले तपाईँ बलियो र स्वस्थ हुनुका साथै तपाईँको आत्मविश्‍वास पनि बढ्‌नेछ।
“एक वर्षअगाडि एक चोटि पुस-अप गर्न पनि गाह्रो लाग्थ्यो तर अहिले दस चोटि गर्न सक्दा धेरै खुसी लाग्छ। तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, म आफ्नो शरीरको ख्याल राख्दै छु।”—ओलिभिया।
व्यायाम गर्दा तपाईँको आयु लामो हुन सक्छ। शारीरिक रूपमा सक्रिय रहँदा तपाईँको मुटु र त्यसका रक्‍तनलीहरू अनि श्‍वासप्रश्‍वास प्रणाली राम्रो हुन्छ। एरोबिक व्यायामले धेरै मानिसको मृत्यु हुने मुख्य कारण मुटुसम्बन्धी रोगहरू हुनबाट पनि जोगाउँछ।
“यदि हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने राम्रो तालिका बनाएर व्यायाम गर्छौँ भने हामीलाई जीवन दिनुभएकोमा सृष्टिकर्ताप्रति कृतज्ञता देखाइरहेका हुन्छौँ।”—जेसिका।
महत्त्वपूर्ण कुरा: व्यायामले पछि धेरै फाइदा गर्नुका साथै अहिल्यै पनि स्वास्थ्य राम्रो बनाउन मदत गर्छ। तान्या नाम गरेकी युवती भन्छिन्‌, “हाइकिङ गइसकेपछि वा एकचोटि दौडेपछि ‘ओहो! म नगएको भए नि हुन्थ्यो!’ भनेर तपाईँ कहिल्यै भन्‍नुहुन्‍न। मैले पनि बहाना बनाउन छोडेर व्यायाम गर्न सुरु गरेदेखि कहिल्यै पछुताएकी छैनँ।”
मर्मत सम्भार नगरिएको गाडीले पछि काम गर्न छोडेजस्तै व्यायाम नगर्दा शरीरले पनि काम गर्न छोड्‌छ
यस्ता केही बाधाहरू हुन सक्छन्‌:
उत्प्रेरणा नभएकोले। “मेरो विचारमा धेरै जसो युवाहरू आफू जवान हुँदा त कुनै पनि रोगले छुँदैन भनेर सोच्ने गर्छन्‌। कुनै दिन आफूले पनि स्वास्थ्य समस्याहरू भोग्नुपर्ला भनेर कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। रोग भनेको त बूढाबूढीको कुराजस्तो लाग्छ।”—सोफिया।
समय नभएकोले। “मेरो तालिका एकदम व्यस्त हुने भएकोले राम्रोसँग खाना खान र सुत्न त समय निकाल्न गाह्रो छ। झन्‌ व्यायाम गर्नको लागि समय निकाल्ने कुरा त परै जाओस्‌।”—क्लारिसा।
जिमको सदस्यता नभएकोले। “शरीर चिटिक्क बनाउन टन्‍न खर्च गर्नुपर्छ। जिममा गएर व्यायाम गर्न कहाँ सस्तो हुन्छ र!”—जिना।
व्यायाम गर्न तपाईँलाई रोकिरहेको मुख्य कुरा के हो? त्यो बाधा हटाउन मेहनत त गर्नुपर्छ तर त्यस्तो प्रयास खेर जानेछैन।
तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने जिम्मेवारी तपाईँकै हो।—गलाती ६:५.
बहाना बनाउन छोड्‌नुहोस्‌। (उपदेशक ११:४) उदाहरणको लागि, व्यायाम सुरु गर्न जिम नै जानुपर्छ भन्‍ने छैन। आफूलाई कस्तो खालको व्यायाम मन पर्छ, त्यो पत्ता लगाउनुहोस्‌ र त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्‌।
अरूले कस्तो-कस्तो खालको व्यायाम गरिरहेका छन्‌ भनेर बुझ्नुहोस्‌।—हितोपदेश २०:१८.
पक्का तालिका बनाउनुहोस्‌। लक्ष्य राख्नुहोस्‌ र आफ्नो जोस कायमै राख्न आफूले हासिल गरेको प्रगतिको रेकर्ड राख्नुहोस्‌।—हितोपदेश २१:५.
आफूसँगै व्यायाम गर्न सक्ने साथी खोज्नुहोस्‌। सधैँ तपाईँसँगै व्यायाम गर्ने साथीले हौसला दिनेछ र तालिकाअनुसार चल्न मदत गर्नेछ।—उपदेशक ४:९, १०.
आफ्नो प्रगतिमा बाधा पुऱ्‍याउने कुराहरू आउनेछ भनेर नबिर्सनुहोस्‌ र ती आइपर्दा हरेस नखानुहोस्‌।—हितोपदेश २४:१०.
पुरुष र स्त्रीको ‘आनीबानी सन्तुलित हुनुपर्छ’ भनी बाइबल बताउँछ। (१ तिमोथि ३:२, ११) त्यसैले व्यायामप्रति सन्तुलित दृष्टिकोण राख्नुहोस्‌। व्यायामप्रति अचाक्ली लग्गू हुने व्यक्‍तिलाई मानिसहरूले अक्सर राम्रो ठान्दैनन्‌। जुलिया नाम गरेकी युवती भन्छिन्‌, “पाखुराको धाकचाहिँ लगाउने तर बुद्‌घिचाहिँ नचलाउने केटा मलाई मन पर्दैन।”
“जति थाकेर चुर हुन्छ, झन्‌ बढी गर्ने सुर गर” भन्‍ने जस्ता नारा भएको ‘व्यायाम गर्न जुरमुऱ्‍याउने’ विज्ञापनहरूदेखि पनि सचेत रहनुपर्छ। किनभने त्यस्तो विज्ञापनले भनेअनुसारै व्यायाम गर्दा तपाईँको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ र जीवनमा “अझ महत्त्वपूर्ण कुराहरू”-मा ध्यान दिनुको साटो तपाईँ अरू नै कुरामा अलमलिन सक्नुहुन्छ।—फिलिप्पी १:१०.
साथै व्यायाम गर्न जुरमुऱ्‍याउने उद्देश्‍यले गरिएका यस्ता विज्ञापनले वास्तवमा उल्टै निरुत्साहित बनाउन सक्छ। भिरा नाम गरेकी युवती यसो भन्छिन्‌: “धेरैजसो केटीहरू आफू जुन व्यक्‍तिजस्तो बन्‍न चाहन्छन्‌, उसको फोटोहरू जम्मा गर्छन्‌ अनि आफूलाई व्यायाम गर्ने जोस-जाँगर नहुँदा ती फोटोहरू हेर्छन्‌। तर त्यसरी हेर्दा आफूलाई उनीहरूसित दाँज्न थाल्छन्‌ र उल्टै निरास हुन पुग्छन्‌। त्यसैले आफ्नो बाहिरी रूपलाई मात्र नभई स्वास्थ्यलाई सुधार्ने लक्ष्य राख्नुचाहिँ राम्रो हो।”
“मलाई दौडिन मन पर्छ किनभने दौडिँदा आफ्नो चिन्ता फिक्री सबै बिर्सन्छु। दौडिँदा मेरो मुटुको गति बढ्‌नुको साथै क्यालोरी पनि प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा शरीरमा बोसो जम्मा हुन पाउँदैन। दौडिसकेपछि म अझै फुर्तिलो र सन्तुष्ट महसुस गर्छु।”—यास्मिन।
“मलाई सबैभन्दा मनपर्ने व्यायाम भनेको कुनै खेल खेल्नु हो—विशेषगरि बास्केटबल। खेल्न थालेपछि आफूलाई व्यायाम गरिरहेको छु जस्तो नै लाग्दैन। हुनत कुनै खेलमा सिपालु हुन र त्यसमा रमाउन समय लाग्छ तर त्यस्तो प्रयास खेर जानेछैन।”—जोएल।
“हाइकिङ गएर मलाई धेरै फाइदा भएको छ। वास्तवमा भन्‍नुपर्दा शारीरिक तवरमा मात्र नभई मानसिक तवरमा पनि फाइदा पुगेको महसुस गर्छु। धेरै मानिसलाई जस्तै मलाई पनि कहिलेकाहीँ चिन्ता लाग्छ। तर कुनै रमणीय ठाउँमा घुम्न जाँदा म अझै शान्त भएर सोच्न सक्छु अनि स्फूर्ति पाउँछु, जुन कुरा अहिलेको व्यस्त संसारमा विरलै पाइन्छ।”—लिली।
“व्यायाम गर्न झन्झटिलोजस्तो देखिने कुराहरूबारे सोचिनँ भने व्यायाम गर्नु भनेको खासै गाह्रो कुरा होइन। जस्तै, म बास्केटबल खेल्दा यति रमाउँछु कि थकाइ लागेको त पत्तै हुँदैन। अनि बास्केटबल खेल्दा साथीहरू पनि बनाउन सकिन्छ।”—माइल्ज्‌।
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य युवाहरू सोध्छन्‌ किशोरकिशोरी
शेयर गर्ने शेयर गर्ने म व्यायाम गर्न कसरी उत्प्रेरणा पाउन सक्छु?